Maxkamadda Svea Hovrätt 400 sanno u dabaal degeysa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Maxkamadda Svea Hovrätt 400 sanno u dabaal degeysa
"Qarníyadii hore waxey aheyd xarun rag keliya ka shaqeeyo"
La daabacay onsdag 19 februari 2014 kl 11.22
Maxkamada ee darajada dhexe ee Iswiidhen; Svea Hovrätt ayaa u dabaal degeysa 400 oo sanno. Maxkamdan ayaa la aas’aasey sannadka markuu ahaa 1614. Illa laga soo gaarey sannadka markuu 1700 maxkamadaan waxey ahaan jirta maxkamada ugu sareysa dalka balse markii la aas’assey maxkamada sare ayaa laga dhigey maxkamada darajada dhexe kadib markii dib u habeyn weyn lagu sameeyey maamulka xukumadeedka dalka, sida waxaa sheegey madaxweynaha maxkamada darajada dhexe Fredrik Wersäll oo laanta SR International wareysatey.
- Maanta weli waxaan raacna qaab dhismeedkii lagu hirgeliyey maxkamada dhexe taas oo bilow u aheyd howlaha casriga ah ee hab-dhaqanka maamul ee maanta Iswiidhen looga dhaqmo, ayuu yeri.
Waxey aheyd 16 februari sannadkii 1614 markii gacan yarihii qaranka Axel Oxenstiern aas’aasey maamulkan maxkmadeed oo loogu talo galey in lagu xukmiyo arimaha la xiriira faldanbiyeedyada iyo arimaha laysku qabsado, kuwas oo markii hore lagu xukmin jirey keliya maxkamada hoose. Xilligaas la hirgeliyey maxkmadaan waxii ka horeeyey waxaa iska laha howlshan boqorka dalka kaas oo racfaan loo qaadan jirey markii lagu qanci waayo go’aanka maxkamada hoose. Laakiin boqorka dalka arimahan oo dhan waqti umuusan heynin sidaas daraaded ayaa loo hirgeliyey maxkamadaan oo ka tusaale qaadaneysey qaab dhismeedka maxkamadaha Fransiiska, sida uu yeri Fredrik Wärsell.
Svea Hovrätt waxaa xarunteeda tahey dhismaha Riddarholmen ee Gamla Stan, magaalada Stockholm. Xaruntaan qaybta ugu caasan waa dhismaha loogu waco Wrangelska palatset oo maqsinkeeda ahaan jirey xarun mugdi ah oo dadka lagu xiri jirey xilligii uu dalka ka talin jirey boqorkii Gustav_kii saddexaad. Kaalinta maxkamadan ku leedahey garsoorka dalka wax badan ayaa iska badaley tan iyo golkii la aas’aasey, sida uu yeri madaxweynaha maxkamadda dhaxe.
- Kaalinta Hovsrättens ku leedahey garsoorka sannooyinkii danbe waa la sii adkeeyey. Waxaa taa laga daalacan karaa dacwadaha ku saabsan cimilada iyo dhismayaasha oo maxkamadan lagu qaado. Sidoo kale waxaa lagu qaadaan dacwado ku sabsan xaquuq dhowrka qof waxa uu hindisey iyo arimaha ku sabsan ganacsiga, arimahan oo loo arkey kuwo aan looga marmin maxkamadda dhaxe. madadhaxe.
Waxaa sidoo kale jira isbadal kale waqti danbe maxkamdaa dhexe ku soo kordhey.
- Isbadelka ugu weyna waxaa qabaa in uu yahay saddex illa afar qarni Svea Hovrätt waxey xarun shaqo u aheyd rag keliya. haweeneydii ugu horeysey waxey maxkamadaan ka shaqo bilowdey muddo ka yar boqol sanno. Maantase maxkamadaan shaqaalaheeda inta badan waa haween, haddii ay ahaan la heyd garsoorayaasha iyo shaqaalaha kaleba. Taas waa isbadel weyn ayuu yeri.
Mantta Svea Hovrätt waxaa ka howl-gala 140 ruux. 90 kamid ah waa garsoorayaal. Qaar badan oo kamid ah qaryaqaanada ka howl-gala maxkmadaan waxey asalkooda maanta ka soojeedan dalka dibaddiisa.
- Dhibka weyn waxuu ka jiraa dhanka luuqada oo ah qalabka ugu weyn oo maxkamada looga shaqeeyo waxna lagu cabiro. Qaar badan dhallinyarada soogalootiga waxey dhaqso ayey awoodaas luuqadeen u sameysteen, waxaana fileynaa in ay halkan ka soo shaqo doontaan., ayuu yeri madaxweynaha maxkmada dhaexe Fredrik Wersäll.